स्तन Archives - Nepalpatra
विश्वकै ठूलो स्तन बनाउन ११२ पटक सर्जरी गरेपछि…
एजेन्सी । अमेरिकाको फ्लोरिडाकी ४४ वर्षीय पाउला साइमन्ड्स आफ्नो स्तनको साइज बढाउनको लागि अहिले सम्म १२ पटक स्तनको सर्जरी गराइसकेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । पाउला आफ्नो एल कप साइज स्तन विश्वमै सबै भन्दा ठूलो होस् भन्ने इच्छा राख्ने गर्थिन् । यहि इच्छाको कारण उनी आफ्नो स्तनको ११२ पटक सर्जरी गराउन […]
थाहा पाउनुहोस्, महिलाको कुन साइजका स्तनप्रति पुरुष आकर्षित हुन्छन् ?
एजेन्सी, हरेक युवती चाहन्छिन्, कसिलो, पुष्ट एवं सुडौल स्तनप्रति बढीभन्दा बढी पुरुष आकर्षित हुन्छन् । प्राकृतिक रुपमा सबैको स्तनको आकार र बनौट एकसमान हुँदैन । एक अध्ययन अनुसार सानो वा ठूलो कुन प्रकारका स्तनमा पुरुषको आकर्षण बढी हुन्छ भनि गरिएको एक अन्तरराष्ट्रिय सर्बेक्षण यसबाट एकरुपता पाइएको थिएन । त्यसमा पुरुषलाई सोधिएको थियो, कुन ब्रेस्ट साइज […]
थाहा पाउनुहोस्, केटाले महिलाको स्तन हेर्छ भने महिलाले पुरुषको के हेर्छन ?
एजेन्सी, हरेक पुरुषहरुको नजर महिलाको स्तनमा जान्छ भने महिलाको भने पुरुषको आखामा जाने गरेको अध्ययनले प्रमाणित गरेको छ । यूनिभर्सिटी अफ ब्रिटिश कोलम्बियाले गरेको अध्ययन अनुसार, पुरुषको आँखाले महिलाहरूलाई सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्छ । त्यस्तै ब्रिटेन र साउथ अफ्रिकाको तीन यूनिभर्सिटीजको अध्ययनबाट पनि यो कुरा पुष्टी भएको छ । महिलाहरु यी अंग […]
यौन सम्पर्क गर्ने क्रमलाई आनन्दमय बनाउन मानिसहरू अनेक उपाय सोच्छन् ।सेक्सका क्रममा पुरुष साथीले महिलाको स्तन मिच्ने समेत गर्छन् । यौन सम्पर्कअघि यौन उत्तेजना बढाउन स्तन मिच्ने गरेपनि यौन सम्पर्कका क्रममा स्तन मिच्नु ठीक हो कि होइन भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुन सक्छ । यौन पार्टनरको स्तन मिचेर आनन्द उठाउने पुरुषहरूको लागि एउटा अध्ययनको निष्कर्ष खुशी […]
१३ कात्तिक, चौतारा । रोग लागेर अशक्त नभएसम्म स्वास्थ्य परीक्षण नगराउने ग्रामीण भेगका अधिकांश महिलामा स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सर फेला परेको छ । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१२ स्थित साँगाचोकमा सोमबार आयोजित स्तन तथा पाठेघरको मुखको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणबाट सो तथ्य फेला परेको हो । बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका क्यान्सर रोकथाम विशेषज्ञ डा किशोर […]
यसकारण स्तनपान गराउँदैमा झोल्लिदैनन् स्तन
आफ्ना सन्तानलाई स्तनपान गराउँदा महिलाले अपूर्व आनन्द अनुभूति गर्छ । स्तनपानले शिशुको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्छ । तर बारम्बारको स्तनपान कतिपय महिलाका लागि भने पीडादायी हुन सक्छ । महिनौंसम्म स्तनपान गराउँदा दिक्क पनि लाग्न सक्छ । केही महिलामा स्तनपान गराउँदा स्तन झोल्लिने भ्रमसमेत छ । तर स्तनपानले भन्दा पनि उमेर, तौल, पोषण, व्यायाम […]
मानिस जन्मिसकेपछि विभिन्न चरणमा शरीरका अंगहरु विकास भएको हुन्छ । त्यी चरणसँगै महिलाहरुको पनि शारीरिक अंगहरु विभिन्न चरणवद्ध रुपमा विकास भएको हुन्छ । विकास भएसँगै महिलाहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु पनि हुन्छ । विशेषगरी सबै महिलाहरुलाई थाहा नहुन सक्छ, कि आफ्नो शरीरको अंगहरुलाई स्वस्थ राख्नको लागि कस्तो कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर! त्यसैले गर्दा महिलाहरुमा पछिल्लो समय […]